Fil d'actualités du 15/12/2018
15/12/2018 - 11:00 : MARC RAVALOMANANA : Mahitsy, Faratsiho, Antsirabe no hanaovany fampielezan-kevitra anio mialohan'ny eny Mahamasina.
13/12/2018 - 10:00 : ONJAM-PEO MIARA-MIAMPITA: Hisy ny fandaharana Miara-miampita iarahan'ny MBS Radio 95.4 fm, Radio Mada 102.8 fm, ToP Radio 102.8 fm, miampy radio maro manerana ny Nosy amin'izao ora izao.
13/12/2018 - 09:30 : POLITIKA MALOTO: Misy ny fizarana vola 5 tapitrisa ho lehiben'ny distrika mba hanodikondina safidim-bahoaka, raha ny nambaran'ny kandida Ravalomanana tany Farafangana.
Archive du 20180919
Fampandaniana an’i Dada Mirohotra miditra KMMR ny olona
Nanamafy Atoa Constant Raveloson raha nivahiny tao amin’ny fahitalavitra MBS fa tena vao miha nampientam-po ny olona ilay fanamafisan’i Marc Ravalomanana ny maha kandida azy nandritra ny hetsika goavana teny
Hery Rajaonarimampianina Manana olana amin’ny HVM !
Anio no hotokanana ny foiben-toerana na ny QG (Quartier Général) ho an’ny kandida Hery Rajaonarimampianana eny Andraharo, raha tsy misy ny fiovana. Tsy eny Antanimena misy ny foiben’ny HVM io, izay mariky ny mety ho fifanolanana na tsy fitovian-kevitra.
Jean Omer Beriziky Mahatsapa fa misy ny fanavakavahana
Mahatsapa ny iharana fanavakavahana manoloana ny fanesorana ny fanesorana ny takelaby ny antoko Antsika Madagasikara.
Jean Ravelonarivo “Tsy maintsy miara-miasa amin’ny firenena matanjaka isika”
Tsy vaovao ny fiaraha-miasa amin’ny vahiny ary safidin’ny tsirairay ny hanao azy. Tsy maintsy mahafantatra ny atao hoe « Geopolitique » matoa milatsaka ho filoham-pirenena izany ary olon-dehibe.
Ravalo sy mponin’i Vakinankaratra Efa toy ny rano sy vary hatrizay
Antsirabe no anisan’ireo tanàn-dehibe eto Madagasikara tena mandroso eo amin’ny sehatra rehetra nandritra ny fito taona (2002-2009) nitondran’ny kandidà Ravalomanana Marc, laharana faha-25 ao amin’ny biletà tokana.
Andry Rajoelina I Frantsa hatrany no mahalala mialoha ny tetikasany
Tany Parisy, Frantsa, no nampahafantarana voalohany ny Vina IEM na “Initiative pour l’émergence de Madagascar” an’ny kandida ho filoham-pirenena Malagasy, Andrinirina Rajoelina, ny 23 sy 24 mey lasa teo.
Vondron’Olon-Tsotra - Toamasina Manohana 100% an’i Marc Ravalomanana
Nanao fivoriana ny Vondron’Olon-Tsotra (VOT) Toamasina ny alahady teo izay natrehan’ny filoha nasionaliny Zoe Sarah.
Doka miendrika propagandy Nanome 24 ora ny CUA
Tsy nahazoana alalana ireo takelaby fanaovana dokambarotra na “panneau publicitaire” tsy manana endrika dokambarotra, ataon’ireo kandida filoham-pirenena sasany eto Antananarivo Renivohitra amin’izao fotoana,
Me Willy Razafinjatovo « Diso ireo mpiambina ny praiminisitra ! »
Ny kortezin’ny filoham-pirenena, ny fiara mpamonjy voina, ny fiara mpitondra marary, fiara mpitondra razana.
Fifaninana vadintany sy mpanao lavanty matihanina Mpiadina 150 no horaisina manerana ny Nosy
Handray vadintany sy mpanao lavanty matihanina miisa 150 ny Ministeran’ny Fitsarana amin’ity taona ity. Raha araka ny fanazavan’ny maître Ramahefalahy,
Vary sy tsiparifary
Miroso tsimoramora mankany amin’ny fifidianana izay ho filoham-pireneny hatrany Ramalagasy.
Fiangonana manamboara vatsy Hankalaza ny fahafolo taona niorenany
Feno folo taona sahady ny fiangonana “Manamboara Vatsy”. Fotoan-dehibe no entin’izy ireo hanamarihana ny hetsika ny sabotsy 29 sy ny alahady 30 septambra ho avy izao eny amin’ny kianja
LTP Dzamandzar Nahazo ‘cyber-ecole”
Nisitraka sekoly vaovao miompana amin`ny teknolojia ny LTP Dzamandzar ao Nosy-Be Hell Ville. Sekoly hafakely tokoa no azon`ny mpianatra satria sekoly-cyber na « Cyber-Ecole » no natsangana.
Iray volan`ny famotsoran-keloka Mila fehezina ny fitazonana ny basy
Nanomboka omaly talata 18 septambra ny iray volan`ny famotsoran-keloka mba ahafahana mampanaran-dalàna ny fitazonana ny basy sy ny famerenana tsy misy arakaraka izay eo am-pelatanan`ny manana.
Anjanahary II N
Mitohy hatrany ny fanadiovana tanàna tanterahin-dry zareo avy eo anivon’ny boriborintany faha-5.
MIGADRA 20 TAONA
Notsaraina omaly ireo mpianadahy 14 sy 16 taona izay namono zazalahy iray tamin’ny fomba feno habibiana.
Fako mivangongo eto an-drenivohitra Efa nanome kamiao telo hanampiana ny SAMVA ny kaominina
Feno fako mivangongo indray eto an-drenivohitra. Faritra maro no miaina anaty loto tanteraka toy ny eny Anosibe, Anosipatrana, Andavamamba, Andravoahangy ...
Fiakaran’ny vidim-piainana Ny vahoaka hatrany no mizaka ny mafy
Takon’ny raharaham-pifidianana ny fahasahiranam-bahoaka. Miakatra ny vidin-tsolika, miakatra ny saran-dalana, misondrotra ny vidim-bary,…
Loza amin’atambo Zaza efa 8 volana an-kibo nariana an-tatatra
Olona sendra nandalo teo amin'ny lakandranon’i Vasta no nahatsikaritra harona sachet miosona ra ka nampandre ny manodidina.
Volobe na bambou Karazan-kazo hahafahana miady amin’ny fandripahana ala
Manana karazana volobe na bambou miisa 46 isika eto Madagasikara ankehitriny.
Fifanarahana ara-ketra Tombony ho an’ny mpandraharaha
Nisy ny atrikasa momba ny fifanarahana ara-ketra notanterahina tetsy amin’ny Hotely Colbert Antaninarenina omaly talata 18 septambra. Mbola vao 4 ny fifanarahana nataon’i Madagasikara hatramin’izay kanefa efa nahazo traikefa ny firenena Malagasy tamin’ny tranga roa farany, araka ny fanambaran’ny tale jeneralin’ny hetra Andriamatoa Razafindrakoto Louri Garisse.